राप्ती नगरपालिकामा एमालेकाे जित सुनिश्चित |
प्रकाशित मिति :2017-05-08 11:18:41
चितवन । नेकपा एमाले राप्ती नगर पालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार प्रभा बराल विगत लामो समयदेखी नेकपा एमालेको विभिन्न तहमा काम गरिसक्नुभएका सक्षम, अनुभवी र लगनशील महिला उम्मेदवारको रुपमा चिनिनुहुन्छ। त्यसैगरी उपमेयर पदका उम्मेदवार ईमानसिंह लामा नकपा एमालेको गाउँ देखी जिल्लासम्म राजनीतिक पहुँच बनाएका एक अनुभवी, सक्षम जनतासँग भिज्न सक्ने हसिला उम्मेदवारको रुपमा चिनिन्छन् । चुनावी अभियानका क्रममा राप्ती नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भएको कुराकानीको छोटो अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
राप्ती नगरपालिकालाई कस्तो नगरपालकिा बनाउने सोच छ ?
यो नगरपालिका पहाड, तराई मिसिएको नगरपालिका हो । यसलाई हामी आधुनिक र स्मकार्ट सिटी बनाउने योजनामा छौ ।
कस्तो स्मार्ट सिटी ?
हामीले यो नगरपालिकालाई तीन भागमा विभाजन गरी विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौ । आधुनिक कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकास र आधुनिक शहर यो हाम्रो योजना हो ।
के हो यसको आधार ?
हामी बाटो, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई विषेश प्राथमिकता साथ अगाडी बढनउछौ तत्कालै भण्डारामा हामी १५ शैयाको अस्पताल निर्माणमा जुटेका छौ । यसैगरी यस नगरपालिकामा लगभग पचास, साठी किलोमिटर तत्काल कालोपत्रे गर्ने योजनामा छौ । घरघरमा स्वस्थ खानेपानीको लागि शहरी खानेपानी योजना अन्तर्गत काम भईरहेको छ । त्यो हामी तत्काल पूर।ा गर्ने योजनामा छौ र सिंचाई हुन सक्ने ठाँउमा बाह्रै महिना सिंचाईको ब्यवस्था गरिरहेका छौ ।
यो नगरपालिकामा पहाड पनि छ, त्यस्को लागि के सोचीरहनुभएको छ ?
हो, विकट पहाड र विषेश गरी चेपाङ वस्ती भएको लोथर र कोराकका विकट गाउँहरुमा हामी बाटोघाटो खानेपानी स्वस्थ्य शिक्षा,स्कूल लगायत अत्यावश्यक विषयहरु तत्काल पूरा गर्न लागि पर्नेछौ । यसरी नै हामी राप्ती नगरपालिकालाई हामी स्मार्ट सिटी बनाउछौ ।
के जित सुनिश्चित छ ?
निश्चय नै हामी जितिसकेका छौ । खाली हामी त्यो दिन कुरीरहेका छौ । नेकपा एमाले राष्ट्रको पक्षमा लड्ने पार्टी र विकासको मूल फुटाउने पार्टी भएकाले जनताले हामीलाई पत्याएकमा छन् । पचहत्तर देखि असी प्रतिशत जनता हाम्रो पक्षमा छन् । हाम्रो जित सुनिश्चित छ ।